स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली ! – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२० चैत्र २०७६, बिहीबार ००:३० English
काठमाडौँ, १६ पौष । यातायात व्यवस्था विभागले प्रयोगमा ल्याएको स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली भेटिएको छ । नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र प्रयोग गर्नेहरु बढेपछि त्यसलाइ हटाउन विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
प्रहरीले नक्कली स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र भएका एक सवारी चालकलाई सातदोबाटोबाट पक्राउ गरेपछि स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने गिरोह सक्रिय रहेको खुलेको हो । महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार नक्कली लाइसेन्स तयार पार्ने न्यूरोडको फोटो स्टुडियोमा प्रहरीले छापा मारेको छ । छापा मार्दा पुरानो फोटो स्टुडियो कन्सर्नका सञ्चालकसहित पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको नाम खुलाईएको छैन ।
१६ पुष २०७६, बुधबार १४:१५ मा प्रकाशित